Liverpool oo 5-0 kugaraacday Swansea City +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Liverpool oo 5-0 kugaraacday Swansea City +SAWIRRO
Shan gool oo ay kala dhaliyeen Chamberlain, Firmino, Coutinho iyo Arnold ayaa Liverpool u sahlay iney guul weyn ka gaarto dhigeeda Swansea City, waxeyna ka dhigan tahay iney wadadii guulaha dib ugu soo laabteen.
Guushaan waxey ka saaciday iney dib ugu soo laabato booskeeda 4-aad oo ay galabta kala baxday Tottenham Hotspur kuwaas oo guul weyn ka gaaray Southampton kulan Harry Kane uu dhaliyay sadexley.
Liverpool waxey ku bilowday si xawaare ah iyadoo joogta Anfield Road, waxaana dhawr isku day bilowgii sameeyay Salah iyo Firmino, balse bandhigga goolasha waxaa bilaabay Philippe Coutinho kaas oo si qurux badan xerada banaankeeda kubad uga toogtay daqiiqadii 6-aad.
Qeybtii hore Reds kuma guuleysan iney dhaliso wax ka badan hal gool, balse qeybtii labaad ayey sida daadka oo kale ugu fataheen goolka kooxda ka dhisan Wales.
Roberto Firmino ayaa shabaqa soo taabtay daqiiqadii 52-aad kaas oo caawinaad ka helay saaxiibkiisa reer Brazil Philippe Coutinho, waxaana xigay laba gool oo ay kaliya 10-daqiiqo u dhaxeysay oo ay kala dhaliyeen Arnold iyo Firmino oo mar kale kusoo laabtay.
Reds waxey gool kale ka ehshay Alex Oxlade-Chamberlain oo kubad ilqabad leh daba mariyay goolhaye Lukasz Fabianski daqiiqadahii ugu dambeeyay ciyaarta.
Natiijada waxey kusoo dhamaatay 5-0 oo ay guusha ku raacday Liverpool, waana kooxda ilaa iyo haatan farqiga ugu badan ku badisay kulamada Boxing Day-ga iyo sidoo kale kulamada 20-aad.
Reds haatan waxey aruursatay 20-kulan, 38-dhibcood kaliya 5-dhibcood ayeyna u jiraan booska labaad ee Man United.